Dowladda Somalia maxaa la gudboon inay uga jawaabto hadalkii Museveni?
Posted On 29-01-2019, 05:42PM
MUQDISHO, Somalia - Dowladda Soomaaliya ayaa ka hadashay hadal kasoo yeeray madaxweynaha Ugnada, Yoweri Museveni oo sheegay in Soomaaliya aysan ka jirin dowlad nidaamsan.
"Waxaa jira dalal badan oo aan lahayn dowlad. Way jiraan, balse ma haystaan hay'ad nidaamsan oo maamusha, Soomaaliya waa mid ka mid ah. Waxaa jira dalal kale balse ma sheegayo sababo diblomaasi awgeed," ayuu yiri Madaxweynaha Uganda.
"Hadalka madaxweyne Museveni wuxuu ahaa hadal cilmiyadeysan oo ma aheyn hadal siyaasadeysan, wuxuu ka hadlay Country oo dal ah, Nation oo ummad ah iyo state oo dowlad ah oo xukuumadii dalka xukunka gaarsiin laheyd, marka Soomaaliya ayuu tusaale usoo qaatay oo waxaa uu yir dalkii Soomaaliya dowladda gacanta ugu ma jirto, oo waad arkeysa Muqdisho waxaa ilaaliya askarttii Uganda , dalkii oo dhan gacanta ugu ma jiro dowladda sida magaalooyinka Bu'aale, Hargeisa iyo meelo kale oo badan , marka lama oran karo Soomaaliya waxaa ka jira dowlad xukunkeeda uu baahsan yahay," Waxaa sidaasi BBC u sheegay Cabdi Wahaab Sheekh Cabdisamad oo ka faalooda arrimaha geeska Afrika.
Inkastoo BBC-da aysan garaneynin ujeedada dhabta ah ee uu madaxweyne Museveni ula jeeday hadalkaasi ayaa haddana dadka qaar waxay aaminsan yihiin in uu ahaa mid uu "ugu gefay" qaranimada Soomaaliya.
Soomaaliya miyay diblumaasi ahaan uga falcelin kartaa?
Ciidammada ugu badan ee nabad ilaalin ahaan u jooga Soomaaliya, kana tirsan AMISOM ayaa ah kuwa Uganda, waxase dad qaar ee indha-indheeya arrima Soomaaliya ay qabaan fikrad ah inta ciidamo shisheeye ay joogaan Soomaaliya, ay adagtahay in dowladda federaalka ay qaadato go'aamo madaxbanaan, oo haddii ay qaadatana ay dhici karto in uu culesy siyaasadeed uu ku keeno.
"Maya Maya kama falcelin karto dowladda, sababtoo ah Museveni wuxuu kamid ahaa wadamadi ugu horeeyay ee Soomaaliya usoo diray ciidamo nabad ilaalin ah, ilaa iyo lix kun oo ciidan ayaa ka jooga Soomaaliya, haddii ay dowladdu uga falceliso sidii Nicolas Heyso oo kale ayay buuq kale galeyso, marka ammaan ahaan dowladda kama falcelin karta". Waxaa sidaasi BBC-da u sheegay Cabdiqaadir Dhaqane oo ka faalooda arrimaha siyaasadda.